5 tilmaamood oo lagu barto Basque | Samaynta iyo daraasadaha
5 talooyin oo ku saabsan barashada Basque
Barashada luuqadu waa mid kamid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee manhajka si loo wanaajiyo ikhtiyaarrada shaqaalaynta iyo helitaanka boosas shaqo oo wanaagsan. In kasta oo Ingiriisigu yahay xulashada ugu badan markay tahay barashada luuqad labaad, haddana dad aad u tiro badan ayaa go’aansada inay ballaadhiyaan aqoontooda oo ka baxsan aaggan. Ma jeceshahay inaad barato Basque? Daaran Samaynta iyo daraasadaha waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo.
1 1. Tababar shaqsiyeed
2 2. Telefishanka Basque
3 3. Dalxiiska
4 4. Fasallada Basque-ga ee gaarka loo leeyahay
5 5. Koorso bilaash ah oo Basque ah
1. Tababar shaqsiyeed
Akadeemiyad hal abuur leh oo u taagan habkeeda barbaarinta waa bai & by. Muxuu ka kooban yahay qaabkani?
Iyadoo loo marayo boggooda internetka, mashruuca waxaa loo soo bandhigay sida soo socota: «Nidaam caqli badan oo loogu talagalay barashada Basque, jilitaanka hadalka oo ku celcelinta iyo soo kabashada tibaaxaha iyo tusaalayaasha iyadoo loo marayo wejiyadaha kaladuwan ee daraasadda lagu meeleeyo xusuusta joogtada ah si ardaygu ugu isticmaali karo hadhow xaaladaha dhabta ah si habsami leh ».
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay wadar ah 5 qaybood, oo leh heerar 30 iyo 70 hawlo kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, ardaygu wuxuu leeyahay hannaan waxbarasho oo shakhsi ahaaneed isagoo ka helaya jawaab celin joogto ah macallinka maamusha qiimeynta joogtada ah.
Faa’iidooyinka ay leedahay habkan barbaarinta ayaa ah in arday kasta uu leeyahay macallin bilaaba waxbarashadiisa. Sidoo kale, adoo awood u leh inaad wax ku barato guriga, waxaad si fudud ugu dhexgeli kartaa qorshahan waxqabad jadwalkaaga si aad ula kulanto yoolalkaaga waxbarasho.
Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto, waxaad sidoo kale isku dari kartaa faa'iidooyinka tababarka khadka tooska ah iyo shaqsi ahaanba markii aad aadeyso akadeemiyada ay xaruntan luqadeed leedahay.
Waad ku tababaran kartaa Basque illaa xiisadaha wada hadalka telefoonka, shaqsi ahaan, ama sidoo kale, iyada oo loo marayo Skype. Buug-gacmeedyo ballaadhan oo suurtagal ah si aad si fiican ugula jaanqaadi karto waxbarashadan waxqabadyadaada maalinlaha ah.
2. Telefishanka Basque
Sida loo barto Ingiriisiga waxaa lagugula talinayaa inaad ku daawato aflaanta asalkooda asalka ah, si la mid ah, haddii aad rabto inaad barato Basque waxaad ku raaxeysan kartaa soo bandhigista barnaamijyada telefishanka Basque iyo sidoo kale dhageysiga barnaamijyada raadiyaha ee luqaddan.
Soo ogow quruxda meelaha astaanta ah sida San Sebastián, guriga xafladaha filimada ee magaciisa lagu xusayo oo helaya xiddigo farshaxan toddobaad ah Sebteembar kasta. Waxay kor u qaadeysaa dalxiiska dhaqanka ee Bilbao halkaasoo aad ku raaxeysan karto soo bandhigista mid ka mid ah qolalka ugu muhiimsan: Matxafka Guggenheim. Magaalada aad sidoo kale ku raaxeysan karto Matxafka Farshaxanka Fiican. Sidaa darteed, jadwal u samee safarada meelaha aad ku tababarto barashada luqadda.
4. Fasallada Basque-ga ee gaarka loo leeyahay
Iyada oo loo marayo Superprof Waxaad heli kartaa xulasho xirfadlayaal ah oo bixiya adeegyadooda fasallada Basque ee gaarka loo leeyahay. Haddii aad macallin ku xulatay boggan, marka hore la tasho fikradaha ardayda kale ee ka soo qayb gashay fasallada macallinka. Sidan oo kale, waxaad heli doontaa tixraac ku saabsan xirfadahooda.
Ardayda doonaya inay sidaa sameeyaan ayaa waliba iska qori kara Dugsiga rasmiga ah ee Luuqadaha barashada Basque.
5. Koorso bilaash ah oo Basque ah
Iyadoo loo marayo websaydhka Kondaira.net waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan koorso Basque bilaash ah awood u yeelashada mawduuc kasta si aad u horumariso heerkaaga.
Dad badan ayaa go'aansada inay uga faa'iideystaan ​​xagaaga waxbarasho iyo tababar. Kuwa kale waxay doorbidaan inay dib u dhigaan yoolalkaan ilaa ay ka soo noqonayaan ciidaha bisha Sebtember. Waqtiga ugu muhiimsan waa midka aad dareemeyso dhiirigelin. Haddii aad rabto inaad barato Basque, shantaan fikradood ayaa u adeegi kara hagitaan si aad u bilowdo waayo-aragnimada oo aad ugu raaxaysato barashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Xarumaha tababarka » 5 talooyin oo ku saabsan barashada Basque
Waa maxay kaararka xisaabta xagaaga?
Maxay tahay inaad barato si aad u noqoto dab-damiye